UPDATE: Somaliland oo gabi ahaan diiday in madaxweyne Farmaajo uu booqasho ku tago magaalada Hargeysa! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Somaliland oo gabi ahaan diiday in madaxweyne Farmaajo uu booqasho ku...
UPDATE: Somaliland oo gabi ahaan diiday in madaxweyne Farmaajo uu booqasho ku tago magaalada Hargeysa!
Hargeysa (Halqaran.com) – Somaliland ayaa waxay si rasmi ah uga hortimid booqashada la sheegay inuu dhawaan Madaxweynaha JF Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku taggi doono Magaalada Hargeysa.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland ayaa riyo maalmeed ku tilmaamtay wararka sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya, oo uu la socdo Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ay dhawaan booqasho ku imaanayan Magaalada Hargeysa.
Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland Liibaan Yuusuf Cismaan, ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn in Farmaajo uu booqasho ku yimaado Magaalada Hargeysa.
“Inuu Farmaajo imanaayo Hargeysa runtii waa riyo maalmeed Iyo hawlgal aan suurtagal ahayn. Xukuumadda Somaliland waxay u taagan tahay inay difaacdo madaxbanaanideeda iyo jiritaanka xuduudaheeda, wax kasta oo ay ku kaceyso.”
Wasiir Kuxigeenka ayaa qoraal uu asxaabtiisa kula wadaagay barta uu ku leeyahay Twitter-ka waxaa uu ugu mahadceliyay shacabka reer Somaliland, oo uu ku ammaanay shacab wadaniyiin ah, isla-markaana feejigan.
“Waxaan u mahadcelinayaa shacabka reer Somaliland ee wadaniyadda iyo feejignaanta badan.” Ayuu yiri Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland, Liibaan Yuusuf Cismaan.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa lagu wadaa inuu arrimahan ka hadlo maalmaha ina soo aadan, oo sida uu qorshuhu yahay uu khudbad u jeedin doono Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliland.
Gudoomiyaha Golaha Guurtida Somaliland, Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa Axaddii maanta sheegay in Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya, uu Somaliland ku cadaadinayo booqasho ay isaga iyo Farmaajo ku yimaadaan Magaalada Hargeysa.
Faysal Cali Waraabe, Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka UCID ayaa booqashada Madaxweyne Farmaajo ee Magaalada Hargeysa ku sheegay mid deelqaaf ku ah Madaxweyne Muuse Biixi.
Si kastaba ha’ahaatee, shacabka reer Somaliland ayaa aad u hadalhaya wararka la xiriira booqashada Madaxweyne Farmaajo ee Magaalada Hargeysa.
Somaliland oo gabi ahaan diiday inuu madaxweyne Farmaajo booqdo Hargeysa